October 20, 2021 F.G 0
Somaliya, waa nalagu dhax jiraa, mana ogin Jaamacadda Islaamiga ah ee Tel Aviv waxaa la asaasay 1956dii, Kuliyadda ugu muhimsan in kasta oo la yiraa Ardayda oo dhan waa loo ogolyahay, Dhab ahaan waxaa wax ka barta oo kaliya Ardayda Yuhuuda ah ee xiriirka la leh Sirdoonka Mossad. Waxaa lagu bartaa, Culuumta la xiriirto Islaamka sida Caqiidada, Tafsiirka, Fiqiga, Axaadiithta, Axkaamta, Taariikhda, Luqadda Carabiga, oo loo barayo sida ey u rabaan yuhuudu, waxaa wax ka dhiga Macalimiin takhasus kaa leh, iyo kuwa Bartay Siyaasadda iyo Dhaqanka islaamka, hab dhaqanka Qofka islaamka ah iyo sida loo kala furfuri karo Muslimiinta, iyo Mabaadiida guud ee ah: Muslimiinta dhaxdooda isku mashquuli intii ey Adiga ku mashquuli lahaayeen. ilaa 30,000 Arday ayaa dhigato, Ardaydaasi marka ey ka soo baxaan waxaa loo qeybiyaa Dunida iyaga oo xirfado kale ku shaqeysanaa, qaarkood waxaa loo furaa idaacado iyo TV-yo ka hadlo arrimaha islaamka. Ardaydii ugu caansaneed Sannadahan waxaa ka mid ahaa, Imaamkii Masjidka Libiya Abu Xafsa oo Magaciisa Runtaana uu ahaa Binyamin Ifrayin, yahuudkaa oo meela badan ka soo shaqeeyay isaga oo [Sii aqri]
Ma dhawa oo waxbaa dhiman! Q-1AAD
October 16, 2021 F.G 0
Ma dhawa oo waxbaa dhiman! Q-1AAD Jidadka waxaa yaal qashinkii aan xaafadaha ka soo fogaynay guryahana waxaa buuxa akhlaaqdii aan dariiqa ka soo barannay, culumadii kutubtii ayey hadba dhinac u rogtaa, bulsahadiina waxay qabaan su’aal ciida ka badan, waxaan nahay dad ooman oo biyo ay hoostooda buuxaan baahan oo leh dhul baaxad wayn oo barwaaqo ah, daacadnimadi iyo is-aaminaaddii oo geeddi ah ayaa tallaabay xudduudaha nagu hareeraysan markaas ayaan naq-raacnay. Annagguse magacyo iyo maryo kala midab ah ayaan siisanayaa qarannimadii sannado ka hor tahliisha iyo toorayda uu dhagaxa iyo waranku wehliyo lagu soo dhicyay, maanta dadkii ay aabbayaashood u halgameen ayaa duullaan ku ah qalfooftii ka soo hartay magaca Soomaalinnimo. Muunadda dal uu leeyahay waxaa saldhig u ah sida ay u ilaaliyaan dhaqanka, taariikha ummadda iyo suugaanta, maantase waxaan dul taagannahay meeshii laga siibay udubbadii dhaqanka ooyin iyo baroor moog iyo maqaam loo dhiso waa mid aan meesha oollin, haddii ay jiraan dadaallo dib loogu soo celinayo wadiiqadii uu lahaa waxaan dirbiyada fadhiyo dadkiisa oo ay qalimada ka qallaleen, qaarkoodna aan maalmahaan u heesin jcayl, [Sii aqri]
Kulanka Wada Tashiga Mid Ka mid ah Beelaha Somaliyeed Oo Ka Dhacay Degmada Ceelbaraf
September 20, 2021 F.G 0
Sida ay wararka sheegayaan Waxaa maanta Kadhacay Guddaha Degmada Ceelbaraf ee G/SH/DHEXE kulan wadda tashi ah Oo ay isugu yimaadeen Mid ka mid ah Beelaha Soomaaliyeed Gaar ahaan beesha Buraale-muuse Agoonyargabane. Abgaal Cismaan. Sida ay dad goobjoogayaal ah inoo sheegeen Dadka Ka soo qeeybgalay kulanka ayaa isaga kala yimid Degaanada ku dhaw Ceelbaraf Sida Ceeldheere Caadleey Miirtaqwe-adenyabaal.Mahadaay.Jowhar Biya-cade Muqdisho Iyo Dalka Dibadiisa. Kulankaan ayaa ahaa Mid ay uga tashanayeen Beesha Roobsuge- Mustaqbalkeeda Horumar Mid dhaqaale Iyo Mid Amni, Kulankaasi ayaa la sheegayaa in la isku dhaafsaday Hadalo Murti ah Shiribka Ciyaar dhaqmeedka u ah beesha Abgaal Cismaan Waxaana ka soo qeeyb galay Bar-baarta gaasham ,Culamudiinka Aqoonyahanka Dhaliyarada Waxgaradka Haweeynka Ganacsatada Beesha Roobsuge. Iyo Walaalaha Kale ee Abgaal Cismaan. Kulnaakani ayaa Soconaya Mudo Sedex maalin ah waxaana la rajeeynayaa in ay ka soo baxaan Go,aano Masiiri ah .
Fasaadka ay Ka Wadaan Muqdisho Kooxda BASADIIR “Kama Hadlayaan Miyaa Culimada Sheegato Hogaanka Majmacal Islaam Mise Raali ayay Ka Yihiin”
September 18, 2021 F.G 0
Magaalada Muqdisho waxa maalmahaan ku sugan Nin la sheegay in uu yahay majaajiliisti u dhashay dalka Tansania magaciisa ay somalida u taqaan BASADIIR.Bale aan aheeyn Nin maajiliiste ah uuna yahay Nin soo gudbinaayo Fasahaad Toos ah. Sida la sheegayo Waxa uu Magaalada Muqdisho ka dhigayaa SHOW waxaana la sheegayaa in lagu Soo galayo Lacag dolar ah .Waana Nasiib daro ayadoo ay jiraan walaalo somaliyeed oo u baahan in lagu caawiyo lacagtaasi. Kooxda Hogaamineeyso BASADIIR Ayaa la sheegayaa Ujeedka ay Muqdisho u keeneen in ay tahay NGO ayna ku soo qaateen lacag fara badan iyo in ay Bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho Ku Fasahaadiyaan . waxaana ay bilaw u tahay in marka danbo la keeni doono kuwa ka sii waaweeyn. BASADIIR. Dhanka Kale waxaa nasiib daro ah in ay ka aamuseen Culumadii Soomaaliyeed Iyo Wasaaradii Dhaqanka Iyo Arrimaha Diinta Soomaaliyeed . Sidoo kale Culimada Ku Sugan Magaalada Muqdisho ayaa ah Kuwa ka hadlo Ama ka falceliyo Rabitaankooda Ma ahan Kuwo u adeega Diinta islaamka Iyo Waajibaadka ka saaran. Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan culimo [Sii aqri]
MAQAAL:Xal Raadintii Roble Iyo Xujooyinka Farmaajo Waa Noocee?? Dr Nuur C/Raxman
September 16, 2021 F.G 0
Madaxweeynaha Xilka ka dhamaaday Maxamed Farmaajo uu Xilka u dhaariyay R/Wasaare Rooble Waxaana uu Bilaabay wadahadalo siyaasadeed dhanka Arrimaha doorashooyinka waxaana jiray waqtigaa dagaal xoogan oo siyaasadeed una dhaxeeyay Madaxweeynaha waqtiga ka dhamaaday Maxamed Farmaajo Iyo Mucaaradka , Maamul goboleedyada Jubbaland Iyo Puntland. Halkee ayuu shaqa ka bilaabay: R/wasaare rooble ayaa bilaabay shaqo ah in uu kormeer siyaasadeed uu ku soo maro qaar ka tirsan maamuladii diidanaa hab dhaqanka siyaasadeed ee Madaxweeyne maxamed farmaajo.. R/wasaare rooble ayaa safar ku tagay Maamulka Puntland asigoo doonayay in uu kala hadlo arrimaha cakiran ee doorashooyinka hase ahaatee way isku fahmi wayeen . Maxaa dhacay:waxaana dhacday R/Rooble Mar lagu Casuumay Casho Sharaf sagootin aheeyd in uu ka baaqday asigoo Amar ka qaadanayay Madaxweeynihii Hore Maxamed Farmaajo Sidaana uu uga baaqday cashadii sagootinka aheeyd. R/wasaare rooble ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho waxaana uu la kulamay Culeeys siyaasadeed oo ka imaanayay dhanka Mucaaradka Musharaxiinta Madaxweeynaha.waxaana dhacay : Maxaa dhacay :Midowga Musharaxiinta ayaa ku baaqay Banaanbax nabadeed Hase ahaatee waxaa diiday Madaxweynihii Hore Farmaajo Waxxaana weerar lagu qaaday Madaxweeynayashii Hore [Sii aqri]
Taageerayaasha Xisbiga Himilo Qaran “Waa Been Qoraalka lagu Daabacay Caasimada ee Loogu Gafay Musharax Sheekh shariif”
September 6, 2021 F.G 0
Kulan ay isugu Yimaadeen Taageerayaasha Xisbiga Himilo Qaran ayaa Si cad loogu beeniyay qoraal saakay lagu daabacay mareegta caasimada ama warbaahinta caasimada qoraalkaasi oo si Qaldan Loogu Gafay Musharax Madaxweeyne Sheekh shariif Sheekh axmed Qoraalkaasi ayaa ahaa mid lagu sheegay in sheekh shariif uusan ka hadlin Dilka iyo afduubka loo geeystay ikran tahliil . sida ay hadalka u dhegeen taagarayaasha Xisbiga Himilo Qaran ayaa ahaa sidan”Waa qoraal Been ah Waxba kama jiraan Waa Qoraal u gooni ah kooxda qortay “ HOOS KA AKHRISO HADALKA QORAAL BEENINTA AH
September 3, 2021 F.G 0
Waxaa Magaalada Jowhar ee Caasimada Dowlada Goboleedka HirShabeelle ku sii qul-qulaya Wafuud Iyo Musharaxiin u Taagan xilka Senator Aqalka sare Sida la sheegayo waxaa mardhaw laga sugayaa in madaxweeynaha HirShabelle Cali guudlaawe uu so saaro Liiska Musharaxiinta Aqalka Sare. Hase ahaatee Madaxweeyne Cali Guudlaawe ayaa la kulmayo Cadaadis laba dhinac ah kaasi oo ka kala imaanaya Villa Muqdisho Iyo Mucaaradka ka soo horjeeda Dowlada waqigeeda dhamaaday. Dhanka kale Cadaadiska Siyaasadeed ee heeysta madaxweyne cali guudlaawe ayaa ah mid aad u xoogan waxaana uu kaga imaanaya Beelaha ku Nool HirShabelle ayadoo dhawaan laga Hortagay safar uu ku tagi lahaa Magaalada Beledweeyne ayna ka dhaceen kacdoono looga soo horjeeda. Sidoo kale Cadaadiska Taagan Hada ayaa ah Doorashada Sanatorka Aqalka Sare Oo u Dhexeeya Mucaaradka Iyo Dowlada Waqtigeeda dhamaaday. Sida ay sheegeen Dadka ka faalooda siyaasada soomaliya doorashada la filayo in ay ka dhacaan HirShabelle ay tahay mid saameeyn ku leh HirShabelle Mustaqbalkeeda waxaana laga filan karaa in ay ka dhacaan isku dhacyo dhiig ku daato sababtoo ah Villa muqdisho ayaa Koox siyaasiyiin ah oo taageersan fakirkooda u [Sii aqri]
Maxaa Ka Mid ah shanta Qodobada ee Muranka Dhaliyay doorashada dalka ?
August 24, 2021 F.G 0
Shirkii ay Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, 21-kii iyo 22-kii bishan, waxa ay ku heshiiyeen hab raaca doorashada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ee soo aaddan. Shirkaasi Waxa ay madaxda ku sheegeen in ay ku dhammaystirayaan go’aannadii midkii ay yeesheen 29-kii bishii June. Waxay sheegeen in kullankan ugu dambeeyay uu yahay mid ay si gaar ah ugu dhammaystirayaan habraacyada doorashada. Arrimaha ay madaxdii shirtay ka wadahadleen waxaa ka mid ahaa, habraacyada dhiirrigelinta daahfurnaanta, maamulka maaliyadda, xulista ergada, amniga doorashada iyo habraaca ilaalinta qoondada haweenka. Sidoo kale waxay madaxda isla soo qaadeen in habraaca doorashada xildhibaanada Aqalka Sare ee Somaliland xal laga gaaro. Haddaba qodobadii ay madaxda ku heshiiyeen waxaa ka mid ah dhowr arrimood oo guux badan ka dhex abuuray qaar ka mid ah musharraxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya u loolamaya, kuwa u tartamaya Golaha Shacabka iyo odayaashii soo xuli lahaa ergada xildhibaannada cusub soo dooranaysa. 1 – Xulista ergooyinka doorashada iyo kooramka Madaxda Golaha Wadatashiga waxa ay isku raaceen in ergada doorashada ee 101-da ah ee dooranaya xildhibaannad Golaha [Sii aqri]
July 22, 2021 F.G 0
Xog rasmi ah oo aan ka helay saraakiil sarsare oo ka tirsan Hay’adda Nabad Sugidda in muddo ahna aan dabo socday xaqiijinteeda waxay sheegaysaa in mar hore la dejiyay qorshaha lagu khaarijinayo Ikraan Tahliil. Ikraan oo dalka ka maqneed markii shirqoolka loo maleegay ayaa lagu qarash gareeyay boqolaal kun oo dollar iyo balanqaadyo been ah si dalka dib loogu soo celiyo loona khaarijiyo. Ikraan markii dalka ay ku soo laabatay isla markiiba waxaa la xaddiday dhaqdhaqaaqeeda, waxaana loo xilsaaray dabaggalka iyo la socodka Ikraan Taliyaha Nabad Sugidda Gobolka Banaadir Yaasiin Farey. Wuxuuna ahaa qofkii ugu dambeeyay ee Ikraan ay wada hadleen kahor inta uusan go’in xiriirkeeda. Qorshaha khaarijinta Ikraan oo markii hore la rabay in la qariyo ayaa markii qoyskeeda qaylodhaantu ka soo yeertay Fahad Yaasiin isku dayay in uu Alshabaab lacag ku siiyo si ay u sheegtaan dilka Ikraan Tahliil lkn waa guul dareystay isku daygaas kadib markii ay soo farageliyeen sida la sheegay saraakiil sarsare oo Alshabaab ka tirsan qaraabo dhawna ay yihiin Ikraan. Sababta Ikraan in la dilo loo [Sii aqri]
Sidee ku ogaan kartaa in telefoonkaaga la jabsaday Ama aan La jabsan?
July 12, 2021 F.G 0
Telefoonkaagu dabka ma uga dhamaadaa si degdeg ah? Xirmooyinka internet-kaaga se si dhaqsaha ma u dhamaadaan? Astaamaha noocaas ah ee telefoonnada ayaa muujinaya in lagula wadaago oo ay galaangal u leeyihiin burcadda tiknoolajiyadda. Qaabka ay burcadda u jabsadaan telefoonnada ayaa maalinba heer jooga, waxaana mararka qaar adag in la fahmo. “Waxaa dhici karta in uu badan yahay isticmaalkaaga internet-ka, balse haddii uusan badneyn oo ay data-da si degdeg ah kaaga dhamaato, waxaad u baahan tahay in aad hubiso ammaanka telefoonkaaga,” ayay sheegtay shirkadda Norton ee ammaanka qalabka tiknoolajiyadda. Norton ayaa sidoo kale sheegtay in haddii batariga telefoonka uu si aan caadi ahayn dabka uga dhaco, ay taasi muujinayso in la jabsaday telefoonkaaga. Kaspersky oo ah shirkad kale oo ka shaqeysa sugidda ammaanka kombiyuutarrada ayaa sheegtay in batariga telefoonka uu si weyn u shaqeyyo, maadaama kuwa wax jabsada ay adeegsadaan apps kala duwan oo u baahan dad badan. Labadan shirkadood ayaa ku doodaya in loo baahan yahay in qofka uu si dhaw uga warqabo telefoonkiisa oo uu hubiyo in aysan jirin apps uusan la soo degin [Sii aqri]